Ukubuyisela isithuthuthu esikolweni ngokuqhelekileyo kubandakanya ukulungisa i-chassis okanye ipaneli. Kodwa abanini baninzi bafuna ukuqhubela phambili kunye nokubonakala kwebhayisikili kunye nokukhwela.
Ukuzenza umkhonto wokukhwela iigrawethi okanye ukongeza iifake kwisibhenge lesikhumba, ngokomzekelo, into eyenziwa ngabaqhubi beekhithuthuthu ukusuka ekuqaleni kwabo. Bobabini le mizekelo badinga ubuchule kunye nomonde. Iindaba ezilungileyo kukuba i-home mechanics eneendlela zokufikelela kwimpahla yokupenda eyisiseko (oko kukuthi: isibhamu sokutshiza, ukuqhuma umoya, kunye ne-angle-wand).
Iinqununu ezintsha ziza kwiindlela ezahlukeneyo kunye nepeyin, kunye namaxabiso. Kodwa i-helmasi emhlophe okanye emnyama iya kuba yindleko ephantsi kunye neyokuqala iqela lomsebenzi wepayipi. Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukukhangela umenzi wesigqoko kunye nomthengisi wepayipi ukuqinisekisa ukuba imichiza enenjongo yokuyisebenzisa iyahambelana nesixhobo se-helmet's base.
Umfanekiso ohloniphekileyo kaNick Tsokalas
Inkqubo iqala ngokulungiselela indawo yokusebenza nokufumana izixhobo ezifanelekileyo. Ummandla womsebenzi kufuneka uhlambuluke owomileyo kwaye uthuli lukhululekile. Ukubeka i-helmet kwindawo efanelekileyo kwi-workbench kunye nentloko yeSynquin Styrofoam ™ iya kwenza umsebenzi ube lula.
Iifowuni ezipheleleyo zobuso kufuneka zikhutshwe zivalo zabo, kunye nazo nayiphi na iifakeli zeplastiki ezinjengeentonga.
Inxalenye yokuqala yenkqubo kukunciphisa isigqoko esinesiqhekeza esichukumisayo somsimba wendawo okanye umbane wokuhlambela. Oku kufuneka kulandelwe ngokusebenzisa i-wax yokuthengisa kunye ne-graves remover. Umculi odwebe isicathulo esiboniswe apha usebenzisa i-Acetone, kodwa le yingozi yikhemikhali kwaye kufuneka isetyenziswe kuphela ngabadwebi ngolwazi lwezikhuseleko.
Njengoko izandla nezandla zomntu zithwala iifostile, kubalulekile ukuba ugqoke iiglavu ezilahlayo, njengeglafu zeLatex, xa uphatha isigqoko.
Emva kokudlula, umgca wendawo kufuneka uxoxwe nge- sandpaper emnandi (400 ibakala) ukuze ususe i-sheen uze unike isiseko esitsha sopende umgangatho ofanelekileyo wokumelana nawo. Xa yonke i-helmet yomhlaba ixutywe ukunika imbonakalo epholileyo, kufuneka ihlambuluke isetyenziswe ngendwangu ebomvu. Xa umise, ummandla kufuneka ususwe ngokucoca nge-rag ukuze ususe iincinci ezincinci zothuli.
Masking Out Design
Isigqoko kunye naso nasiphi na i-fittings eseleyo kufuneka ivalwe ngoku. Ngokufanelekileyo, iphepha elifanelekileyo elicacileyo naliphi na ukushicilelwa kufuneka lisetyenziswe kule nkqubo kunye ne-Vinyl tape ye-✕ "ububanzi (iteksi elincinci lenza ukugoba ngeenxa zonke okanye ubunzima bobunzima).
Ingubo yokuqala yokupenda (isambatho esisezantsi) ingasetyenziswa ngoku; Nangona kunjalo, kubalulekile ukuvumela ipende ukuba iphele ngaphambi kokuba ufake esinye isambatho ukuze ugweme ukuhamba.
Xa isambatho sesiseko sele somile, idizayini ingasetyenziswa. Kwakhona, kubalulekile ukunqanda uxhumano lwekhumba nomphezulu ukuze ugweme amabala egrisi. Ukunyamekela kakhulu kunye nokusetyenziswa kwetheyipu ye- masking ukuqinisekisa ukulinganisa, umzekelo, uya kuhlawula kwi-helmet.
Ukudweba imibala eyahlukeneyo
Kulo mzekelo, ukuhlula imibala eyahlukileyo, kuphela iindawo apho uphefu obekufuneka kusetyenziswe khona, kodwa iinkalo eziza kufumana umbala ohlukeneyo zavalwa. Emva kokushiya ixesha elaneleyo lokumisa, indawo esandul 'umbala igqityiwe kunye nombala ohlukileyo osetyenziswe kwindawo esandula kubonakala. Le nkqubo iphindaphindiwe de kube yonke imibala ifakiwe.
Ukususa i-masking tape kuphela kuphela xa imibala eyahlukeneyo isomile ngokupheleleyo kwaye kufuneka yenziwe ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukuba upende ayiphunywanga ngexesha lokupenda. Indwangu yokucoca ifanele isetyenziswe kwakhona ukuze isuse nayiphi na ingqungquthela yothuli eboshelwe phantsi kwetheyipu.
Ingubo yokugqibela yokufaka isicelo se-Urethane ingubo ecacileyo (kubaluleke kakhulu ukusebenzisa i-breathing propitiator ngexesha le nkqubo, efumaneka kwiivenkile ezinkulu zezithuthi). Ukusetyenziswa kweengubo ezininzi, kubonakala ngokucacileyo ubunzulu bepende. Izingubo ezine zeengubo ezicacileyo zanele.
Emva kweengubo ezicacileyo zomile (ngokuqhelekileyo iiyure eziyi-12 ukuya kweyesi-24) wonke umgangatho kufuneka unxweme omanzi ukuze ususe nayiphi na i-particles of dust and imperfections ngephepha le-1500 ukuya ku-2000. Ekugqibeleni, wonke umhlaba kufuneka ugxothwe (ikakhulukazi malunga nantoni na iindawo ezinxweme) kunye ne-polishing.
Xa isambatho esicacileyo sokugqibela esomile kwaye senziwe iphosti ngexesha lokugqibela, iziqhotyoshelo ezahlukeneyo zingabuyiselwa kwisigcina.
Nangona inkqubo yokwenza umzobo ongokoqobo yintsebenzo enamandla, umveliso ogqityiwe ngumnini uya kuba nekratshi kunye nomnye oya kuyanconywa ngabaninzi.
Ngaphambi kweZiko eliPhezulu-lokufa (iBTDC)
I-Prague Architecture - Uhambo olutshanje lohambo oluqhelekileyo
20 Uninzi lweeIconic Episodes ze- 'The Simpsons'
Yintoni iYunivesithi yangasese?
Iintsuku zeHama zeHama
Ukuguqula ubuYuda kunye nobuBuddha
Amazwe aseMpuma Mpuma kunye nezixhobo zeNyukliya
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yeeBasque Roads
I-HBCU Isihlandlo: 1837 ukuya ku-1870
Doo Elizabeth Belle Bio